အနက်ရောင် အိပ်မက်တစ်ခု၏ ၀ိဥာဉ်များ...: ကျွန်တော်နှင့် ငြိမ်းချမ်းရာ
Posted by Pyiet Oo Aung at 1:24 AM
Whatagreat thoughts!!! You are very talented and I am amazed to read your post.
Brilliant!! Simply wort it to wait long time to your new post.
ကောင်းတယ်ဗျို့ ဒီဇတ်လမ်းလေးနဲ့ ခပ်ဆင်ဆင် ကြော်ငြာတစ်ခု ကြည့်ဖူးသေးရဲ့ :)
သိပ်ကိုကောင်းတဲ့ ဇတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ပဲအစ်ကိုရေ့... အချစ်တွေ ရှင်သန်နေသ၍
နှုတ်ဆက်သွားခြင်း ..တွေ ဘယ်ရှိမလဲ အရေးသားကောင်းတွေ စောင့်မျှော်နေပါတယ်ဗျာ။
:) YOU START WITH " HAPPY ENDING " AND END WITH " ENDING GOODBYE KISS ", I DON'T KNOW WHETHER IT IS CALLED " HAPPY ENDING " ......
YOU... CHEEKY MOUSE!!! :)
I LOVE YOUR CREATIONS AS EVER & U.
တယောက်နဲ့တယောက် ချစ်တယ် ချစ်တယ်ပြောပြီး နာကျင်ခံစားရအောင် လုပ်နေကြတာတွေကိုပဲ ခဏခဏ မြင်နေရတဲ့ ဒီလောကကြီးမှာ တခါတလေ ဒီလိုဇာတ်လမ်းလေး ဖတ်လိုက်ရတာ စိတ်ကို ကြည်နူးစေပါတယ်။ ကျေးဇူးပါပဲ။ အရေးအသားကတော့ ထုံးစံအတိုင်း ကောင်းနေတာပါပဲ။ အားပေးနေပါတယ် မောင်လေးရေး)
အသေအချာကို ယုံကြည်ပါတယ်။ မေတ္တာတရားဆိုတာ အချိန်ကာလ နဲ့ နေရာဒေသ ဆိုတဲ့ ပညက်တွေ ဘယ်လိုမှ မတားဆီး မနှောက်ယှက်နိုင်တဲ့အရာပါ။ စစ်မှန်တဲ့မေတ္တာတရားကို တန်ဖိုးထားလေးစားမြတ်နိုးတတ်တဲ့ ဘဘကြီးနဲ့ သူ့ အမျိုးသမီးတို့ကြားမှာ သေဆုံးသွားခြင်း၊ လမ်းခွဲသွားခြင်း၊ နှုတ်ဆက်သွားခြင်း ဆိုတာ ဘယ်တော့မှ ရှိလာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ကိုဘလက်ရေ.. အခုလို ရသမြောက်တဲ့အက်ဆေးလေးတွေ ဖန်တီးပေးတဲ့ဒီအိပ်မက်ကို မနက်ဖြန်တိုင်းအတွက် ဖက်တွယ်ထားနိုင်ပါစေ။
wanna come across such luv if it's possible :)
အရမ်းကောင်းတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးပါ....မောင်လေးရေ...( မအိ..)
အင်းပေါ့လေး.. Black Gyi ကခုတော့ Happy Ending post တွေရေးနိုင်ပီပေါ့... :P
ဒါနဲ့ black ကောနှင်းဆီးပန်းဘယ်နှစ်ပွင့် ရှိသွားပီလဲ.. အပွင့်ပေါင်းရာကျော် အထိ နွဲနိုင်ပါစေကွယ်... :D :) :P
ရောက်တုန်း ပို့စ်တွေ တစ်နင့်ကြီး ဖတ်သွားပါတယ်။ လေးစားလျက်
အရမ်းလွမ်းစရာကောင်းတာပဲ။ ဖတ်ပြီးတော့လူကဆို့ နင့်နင့်ကြီးတောင်ဖြစ်သွားတယ်
ဟဲ..ဟဲ... မဲကြီးကတော့ လုပ်ချလိုက်ပြန်ဘီပေါ့လေ.. လန်တယ်နော်...အလန်ကြီးမှ အလန်ကြီးဟေ့....
Sorrrrry. Not working for me. Because I had guessed right how the ending would come out after finished readingafew sentences only in the beginning!
dun mad at me for being straight forward!!! :P *Peace* :P
လာပြောတာနောက်ကျနေပြီ ငါကအရင်တိတ်တိတ်လေးလာဖတ်ပြီးပြီ ပြီးတော့ ထုံးစံအတိုင်းပဲ ဘာမှလာအာမခံမနေနဲ့ လျော်ကြေးပေးရမယ်
မင်းက စိတ်ကူးတင်ပြသည် ဆိုပေမဲ့
ဖတ်ရတာတော့ နင့်နေတာပဲဟေ့ ....
ဒီရင်ဘတ်ကြီးက ခံနိုင်ရည်သိပ်မရှိသေးဘူး။ :P
မပြောတော့ဘူးနော်။ ဘာပြောမလဲသိတယ်မလား။ :P ဘာဆေးတွေစားလို့ဒီလောက်တောင်အရေးအသားကောင်းနေပါလိမ့်။ :D
ရယူချင်း တပ်မက်ခြင်း ငြိတွယ်ခြင်း ဆုံးရှုံးခြင်း ဝေးကွာခြင်းမရှိတဲ့ တကယ့်အချစ်စစ်လေးပေါ့.... သဘောကျတယ်...
ဟင်း... !!!! သိပ်မိုက်တာပဲ... မဲကြီးရာ.......
အရေးအသားတွေ လန်းလှချည်လားး-)
Great Story.. ပဲ ညီရေ. အရမ်းကောင်းတဲ့ ၀တ္ထုလေးပဲ. :)
ဖတ်ရတာ လွမ်းစရာလေး.. ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းလေး ရှိတယ်ကွာ.. သူငယ်ချင်း ရန်ကုန်ရောက်ရင် အိပ်မက်စိုးစန်လား တာရာမဲဝေများ ဖြစ်မလားမသိဘူး။ တကယ်ပြောတာ.. နောက်တာ မဟုတ်ဘူး။